PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-25 - Iyelulwa inkontileka yokuholela impesheni
Iyelulwa inkontileka yokuholela impesheni
I-IFP ithi iyethemba uzotholwa enecala ubathabile Dlamini
Ilanga langeSonto - 2018-03-25 - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO
ISINQUMO senkantolo yezomthetho-sisekelo sokwelula inkontileka, yecash Paymaster Services (CPS), eholela izimali zesibonelelo sikahulumeni, samukelwe yizinhlaka eza-hlukene.
Ngolwesihlanu le nkantolo inqume ukuba yelulwe ngezinye izinyanga eziyisi-6 inkontileka YECPS nesouth African Social Security Agency (Sassa), eyengamele imiholo yezibonelelo zikahulumeni kuleli. Inkatha Freedom Park (IFP) esitati- mendeni esikhiphe izolo, ithe inethemba lokuthi inkantolo yomthethosisekelo izomthola enecala ngokwakhe, lokudala inkinga, lowo owayengungqongqoshe wezenhlalakahle eningizimu Afrika, unkz Bathabile Dlamini.
I-IFP ithe kuyadumaza futhi akwemukeleki ukuthi ngenxa yokwehluleka kukankz Dlamini ukuphatha ngendlela efanele uhlelo lokukhokhwa kwezibonelelo, inkantolo isiphinde yaphoqeleka ukuba igunyaze ukwelulwa kwenkontileka YECPS nesassa engekho emthethweni.
Kuzokhumbuleka ukuthi ICPS yanikezwa inkontileka yokuholela izibonelelo ngowezi-2012. Cishe eminyakeni emibili eyedlule, inkantolo yezomthetho-sisekelo yanquma ukuthi le nkontileka ayikho emthethweni, yayalela isassa ukuba iqale phansi ikhiphe umsebenzi, kuqashwe kabusha inkampani ezokhokha izimpesheni. Ngokuhamba kwesikhathi isassa yehlulekile wukulandela imiyalelo yenkantolo yokuba kukhishwe umsebenzi, kuqashwe kabusha inkampani eholelayo.
Lokho kuphoqe inkantolo ukuba inqume ukuthi yelulwe inkontileka ukuze abantu abahola le mali, okuyizalukazi nezintandane kakhulu, baqhubeke bayithole.
ISITHOMBE NGABE: BROOKINGS
I-CASH Paymaster Services (CPS) isazoqhubeka nokuholela imali yezibonelelo njengoba inkantolo yezomthetho-sisekelo inqume ukuthi iphinde yelulwe ngezinyanga eziyisi-6 inkontileka yayo.